Ampidiro ny Joomla 3.0.x amin'ny mpizara Ubuntu. | Avy amin'ny Linux
Ampidiro ny Joomla 3.0.x amin'ny mpizara Ubuntu.
krel | | GNU / Linux, About us, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Joomla dia CMS malaza iray izay mamela antsika hamorona sy hamorona pejin-tranonkala mavitrika nefa tsy mila mahafantatra fiteny fandaharana na famolavolana tranonkala. Tamin'ny faran'ny volana septambra dia navoaka ny 3.0 ary tokony hiaiky aho fa hatramin'ny 2.5 (LTS) dia zava-dehibe ny fitsambikinana, indrindra amin'ny endrika ivelany.
Ny tanjon'ity fampianarana ity dia ny hametraka ny tontolon'ny famolavolana tranonkala ho azon'ny tsirairay atao. Ny hevitra dia ny ahafahanao manangana mpizara LAMP ary mampandeha pejin-tranonkala miaraka amin'i Joomla. Fomba tsara hampiofanana amin'ny fampiasana an'io CMS io.
Raha hanaraka ny lesona ianao ho toy ny zavatra didactic ka hiditra amin'ny tontolon'ny mpizara tranonkala sy Joomla dia asaina mampiasa milina virtoaly ianao. Manantena ihany koa aho fa mahasoa ho an'ireo rehetra izay, na dia efa nahafantatra an'i Joomla aza izy ireo taloha, dia manolotra ho fanavaozana na fangatahana.
Ny karazana rafitry ny serivera a priori dia tsy miraharaha, raha toa ka mihevitra ny firafitry ny rakitra hierarchical momba an'i Ubuntu / Debian izy ireo. Raha ho ahy dia hampiasa Ubuntu Server 12.04.1 LTS aho, mora ny mametraka azy ary manana fahombiazana tena tsara, lazaiko aminao fa mifanaraka amin'ny sitrakao ny rafitra, saingy natao ho an'ny Ubuntu ny fampianarana. Etsy ankilany, raha tsy misy domain dia hampiasa adiresy IP aho.
Andao hiresaka momba an'i Joomla. Raha hametaka pejy miaraka amin'i Joomla dia mila manatanteraka dingana 4 ankapobeny ianao:
Alefaso fampiantranoana Internet na fampiantranoana (raha manana sehatra tsara kokoa izahay)
Mamorona tahiry ho an'ny Joomla, MySQL (kokoa)
Hosting Joomla amin'ny mpizara.
Alefaso ny installer avy amin'ny browser hijerena sy handamina ny CMS.
Amin'ny ankapobeny dia tena fanabeazana fototra sy mahazatra izy io, nefa, ny fomba handehanana dia miankina amin'ny famaritana antsika manokana. Raha ny momba anay dia tsy hanana cPanels malaza nomen'ny mpamatsy fampiantranoana izahay fa tsy mila izany koa, ary tsy hampiasa XAMPP aho satria hanitatra kokoa ny fampianarana.
Alefaso fampiantranoana Internet na fampiantranoana.
Rehefa mametraka ny Server Ubuntu ho an'ity tanjona ity isika, ny zavatra mahazatra dia mandritra ny fametrahana dia mampiditra mpizara LAMP mivantana sy openSSH iray hafa isika (mety tsara ho antsika izany). Saingy, manomboka amin'ny hevitra aho fa manana rafitra fototra na biraon'ny birao fotsiny isika, noho izany tsy hanana apache napetraka isika.
Inona no fomba mora indrindra hametrahana LAMP amin'ny Ubuntu Server?
Misy programa antsoina mpikarakara asa izay tanterahana mandritra ny fizotry ny fametrahana ary mamela antsika hametraka vondrona fonosana feno ho an'ny asa sasany, mba hanatanterahana azy dia mila ity baiko manaraka ity fotsiny isika. Mitovy amin'ny baiko Yum mahery avy amin'ny groupinstall izany.
Tokony hiseho amintsika izany:
Ny fomba fampiasana azy dia toy izao manaraka izao: Miaraka amin'ny zana-tsipìka fitendry miakatra ambony isika, miaraka amin'ny lakilen'ny SPACE napetratsika asteristika hisafidianana, miaraka amin'ny TAB dia mitsambikina amin'izay lazainy hoe MANAIKY isika ary miaraka amin'ny ENTER dia manamafy izany izahay. Hivoaka tsy miova amin'ny ESC.
Rehefa ekena dia manatanteraka ny fizotry ny fametrahana azy manontolo.
Mandritra ny fametrahana LAMP dia angatahina ianao hanome teny miafina amin'ny kaonty "root" amin'ny database MySQL, zava-dehibe ny hahatsiarovanao ny tenimiafinao satria mila izany isika aorian'ny fametrahana phpmyadmin.
Amin'izao fotoana izao dia efa nahavita dingana iray manan-danja izahay, satria nametraka ny mpizara Apache.
Raha te hahamarina fa miasa io dia mila manoritra ny adiresy IP an'ny mpizara ao amin'ny bara fanaovan-tserasera ianao ary ho hitanao izany:
Raha ny amiko dia 192.168.1.9 izany, raha tsy fantatr'izy ireo hoe inona ny anao, mandefasa ifconfig fotsiny dia jereo ny interface (eth0, eth1, sns) izay milaza hoe addr: xxxx
Toy izany koa, rehefa manomboka ny Server Ubuntu dia asehony antsika izany.
Tsotra toy izany dia efa nahavita ny dingana 1 izahay ary manana mpampiantrano tranonkala mihazakazaka amin'io adiresy IP io.
Raha miasa eo amin'ny tranokala ianao amin'ny mpizara, mila mametraka 127.0.0.1 na localhost ao anaty tranokala ihany ianao.
Mamorona database MySQL ho an'ny Joomla
Ho an'ity dia nampiasa PhpMyAdmin aho.
# apt-mahazo hametraka phpmyadmin
Mandritra ny fametrahana anao dia hanontany anay fanontaniana vitsivitsy izahay.
Ny voalohany. Mpizara inona no tadiavintsika? Raha ny momba anay dia ho an'i Apache ary izany indrindra no tsy maintsy valiantsika.
Manisy marika amin'ny SPACE ao amin'ny Apache2 izahay (jereo ny asterisk). Miaraka amin'ny TAB isika dia mitsambikina handray ary amin'ny ENTER dia manamafy izahay.
Avy eo ity boaty ity dia hiseho ary satria tsy mpandrindra mandroso isika dia mametra ny tenantsika hanisy marika Eny.
Ankehitriny dia hangataka amintsika ny tenimiafin'ny mpampiasa root MySQL aho, izay notereko teo aloha fa tadidinao nandritra ny fametrahana LAMP (dingana 1)
Manoratra azy izahay, mitsambikina miaraka amin'ny TAB mba HANDRAY ary hanohy.
Mila manome teny miafina fotsiny ho an'ny mpampiasa phpmyadmin isika, tsy tokony hitovy amin'ilay teo aloha izy io. Raha ny marina, raha mamaky tsara ianao dia tsy ilaina akory.
Manaiky izahay ary raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony hampandeha azy io.
Manoratra ao amin'ny bara fanaovan-tserasera izahay: Server_IP / phpmyadmin, amin'ny ahy raha tadidinao fa 192.168.1.9/phpmyadmin izany dia hamindra anao amin'ny endrika fidirana phpmyadmin.
Azonao atao ny miditra amin'ny maha root mpampiasa ny MySQL anao amin'ny tenimiafinao malaza izay tsy tokony hadinoinao na amin'ny phpmyadmin mpampiasa MySQL.
Na izany na tsy izany dia tsara kokoa raha misafidy fakany ianao satria ilaina ny manana tombontsoa faka hamorona tahiry ho an'i Joomla.
Toy izao ny ao anatin'ny phpmyadmin:
Hamorona ny angona data izahay izao. Ny fomba fanao tsotra indrindra dia ny famoronana mpampiasa iray amin'ny angon-drakitrao manokana. Amin'ny tombontsoa, ​​eto ambany izahay manampy mpampiasa vaovao:
Tandremo ny fomba namenoako ilay takelaka ho an'ny mpampiasa anarana j3, mizara roa izy io.
Ao amin'ny ohatra, mpampiasa iray antsoina hoe j3 miaraka amin'ny tahiry manana anarana mitovy ary miaraka amin'ireo tombontsoa rehetra ao. Raha nandeha tsara ny zava-drehetra, dia tokony hanana tahiry tahaka izao ny ao amin'ny lisitry ny mpampiasa:
Izahay dia efa nahavita ny dingana 2, mamorona mpampiasa sy tahiry MySQL ao amin'ny joomla.
3. Host Joomla amin'ny mpizara.
Hifindra amin'ny lahatahiry izahay / Var / www / fa tsy maintsy miasa kely isika any. Raha misy tsy mahalala, dia ny laha-tahiry ho an'ny daholobe Apache ary avy amin'ny fomba fijerin'ny browser dia ny fototr'ilay tranonkala
Ankehitriny dia hamorona lahatahiry hampiantrano an'i joomla aho.
Mitombina tanteraka ny fametrahana Joomla ao amin'ny fototr'ilay tranonkala, izany hoe, avy amin'ny fijerin'ny rafitra ao amin'ny /var / www (default). Ny priori dia tsy zava-dehibe loatra satria ny fototr'ilay tranonkala dia azo afindra amin'ny alàlan'ny fanitsiana / etc / apache2 / tranokala misy / default. Ho an'ny mpampiasa zatra miasa miaraka amin'ny serivera dia tsy maintsy averimberina io, saingy satria tsy fantatro izay mety ho liana amin'ity lahatsoratra ity dia voatery manazava antsipiriany vitsivitsy aho. Amin'ity lesona ity dia apetrakao ao anaty lahatahiry dingana iray ambany noho ny / var / www /, ny vokany eo noho eo noho ny fahitan'ny mpizaha dia ny pejy dia ho hita ao: Server_IP / joomla_directory /Raha napetraka tao amin'ny lahatahiry fakany ho an'ny besinimaro izy io, amin'ny alàlan'ny fametrahana ny adiresy IP na domain fotsiny dia hiditra ilay pejy isika. Saingy efa nolazaiko taminao fa azonao atao ny mametraka joomla na aiza na aiza no tadiavinao ary avy eo raha tianao ny ho ao anaty fotokevitra na tsia, dia mila manamboatra fanovana mifanaraka amin'ny apache fotsiny ianao mba hamerenany ny fakany ho an'ny lahatahiry izay tondroinao.
Raha fintinina, amin'ny tranga manokana i Joomla dia:
Mamorona lahatahiry antsoina hoe joomla in aho / Var / www:
faka @ ubuntuS: / var / www # mkdir joomla
faka @ ubuntuS: / var / www # cd joomla
Handefa an'i Joomla izahay izao. (Kinova espaniola)
Ny tutorial dia mifototra amin'ny Joomla 3.0.1 fa noho ny tanjony dia tsy misy miova raha ny amin'ny kinova ankehitriny, 3.0.2.
Nampiasa wget avy amin'ny mpizara aho, fa azonao atao ihany koa ny misintona ny rakitra ao anaty solosainao ary miaraka amina client FTP toa an'i Filezilla mampakatra ny rakitra ao amin'ilay mpizara.
# tar -xjvf Joomla_3.0.1-Espaniola-Pack_Completo.tar.bz2
Raha mitanisa ireo lahatahiry isika dia hanana izany rehetra izany:
Alohan'ny hanombohana ny fametrahana dia mbola mila mamaha ireo zavatra teo aloha hafa isika ary manatanteraka fanamarinana sasantsasany.
Ny zavatra voalohany sy tena zava-dehibe dia ny fanomezana tombontsoa manoratra Apache ao amin'io lahatahiry misy an'i Joomla io (/ var / www / joomla). Raha ny teôria dia azo tanterahina ny fametrahana ny Joomla, saingy zavatra maro tokony ho mandeha ho azy, toy ny famoronana rakitra fisie sasany sy ny hafa amin'ny ho avy, tsy maintsy ataontsika amin'ny alàlan'ny tanana amin'ny alàlan'ny terminal izany ary manome toky anao aho fa tsy misy milay.
Amin'ny fizarana hafa toy ny CentOS dia tsy maintsy jerenao hoe ahoana no amaritan'ny rafitra ny apache, heveriko fa amin'izany dia apache: apache.
Ity baiko ity izay manana rafitra:
Raha fintinina dia ataon'i Apache tompon'ny lahatahiry miverina (ny ao anatiny koa)
Avy eo amin'ny pejin'ny http://www.joomlaspanish.org/ mampitandrina anay:
Ho an'ity kinova ity dia toy izao ny fepetra takian'ny rafitra:
register_globals tsy maintsy tapaka (Off)
magic_quotes_gpc tsy maintsy maty (Off)
Ny voalohany dia mora ny manamarina ilay baiko:
# politika apt-cache cache php5
Azontsika atao ny manamarina fa manana kinova ambonimbony kokoa izahay. Jiro maitso.
Tsy maintsy tadiavintsika ity manaraka ity ao amin'ny rakitra php.ini:
Izy io dia rakitra lehibe ary atoro anao ny fampiasana Ctrl W hahitanao ireo andalana.
Raha tsindraindray izy roa dia tao amin'ny Off fa tsy ratsy ny manamarina hatrany.
Farany. Izao no fotoana hametrahana joomla.
4. Alefaso ny installer avy amin'ny browser hijerena sy handamina ny CMS.
Raha te hanao an'io dia mila apetraka fotsiny amin'ny browser: Server_IP / joomla (raha sanatria ao amin'ny lahatahiry faka, dia ampy ny adiresy IP na ny fonenana)
Ao amin'ny ohatra asehoko dia:
Avy eo dia hoentin'ilay mpanamory ao amin'ny installer avy hatrany izy ireo.
Ho hitan'izy ireo izao manaraka izao ary tsy maintsy nofenoiny ireo takelaka.
Ny fizotry ny fametrahana, araka ny hitanao, dia voafetra amin'ny famenoana endrika telo sy izay rehetra ao anaty endrika »manaraka manaraka mandra-pahavitan».
Ity endrika voalohany ity dia mila tsy mila fanazavana:
Fanazavana fotsiny, amin'ny mpampiasa Administrator azonao apetraka ilay tadiavinao, tsara kokoa aza ny tsy mametraka "admin" ary mazava ho azy fa tsy maintsy manome teny miafina mahery anao izy ireo. Miaraka amin'io mpampiasa io no ahazoanao mitarika priori hitantanana ilay tranonkala.
Ity ambany ity ny bokotra izay tsy nety tamin'ny sary. Raha tsy izany dia maty izy, avelao toy izany satria azo ovaina izy io aorian'izay.
Miaraka amin'ny bokotra NEXT manaraka dia handeha amin'ny form 2 ianao.
Amin'io endrika faharoa io dia ho hitanao fa misy dikany daholo ny zavatra nataontsika rehetra sy ny phpmyadmin. Hangataka amintsika mpampiasa sy database MySQL hampiasaina izy io.
Ny endrika 3 mihoatra ny endrika dia mamintina izay efa namboarinay ho an'ny fametrahana.
Andao hojerentsika amin'ny antsipiriany izay voalaza ao. (Nozaraiko ho sary maromaro izy mba hahitana azy)
Manamarika izahay fa mametraka ny angona ohatra amin'ny Espaniola.
Araka ny hitanao, saika ny zava-drehetra amin'ny maintso, rendrarendra izay tsy hanananao amin'ny ankamaroan'ny mpamatsy fampiantranoana. Ny sisa ataonao dia tsindrio ny bokotra install.
Tokony hofafantsika ny fampirimana fametrahana, mitovy amin'ny fanesorana ny CD fametrahana amin'ny rafitra iray avy ao amin'ny floppy disk. Ny fipihana ny bokotra volomboasary dia hanafoana azy io.
Raha mankany amin'ny Frontend an'ny tranokala dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra "Site" ary ny Backend amin'ny bokotra "Administrator".
Ho an'ireo mahalala ny kinova Joomla teo aloha, dia hahagaga fa ny modely Frontend sy Backend default dia nanana fiakarana tsara.
Araka ny hitanao, ny fiakaran'ny tarehy dia manan-danja raha oharina amin'ireo kinova teo aloha.
Ho anao izay mbola tsy niara-niasa tamin'i Joomla dia tsotra tahaka ny fametrahana ny domain / administratera ny mandeha eo alohan'izay mankany amin'ny backend.
Ao amin'ny ohatra asehoko:
Backend: Server_IP / joomla / mpitantana
Ny tendrony aloha: Server_IP / joomla.
Izy ireo dia efa manana an'i Joomla ary mihazakazaka ary vonona hanakorontana amin'izay tadiaviny.
Miarahaba ary manantena aho fa tianao ilay fampianarana, somary lava nefa miaraka amin'ny antsipiriany rehetra mety ilain'ny olona manomboka. Raha avelanao aho, miasa amina lahatsoratra iray aho hametrahana fepetra fiarovana sasantsasany ho an'i Joomla izay mety ho vonona afaka andro vitsivitsy. Manantena aho fa tsy niteraka anao loatra.
Fampahalalana bebe kokoa amin'ny: http://www.joomlaspanish.org/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ampidiro ny Joomla 3.0.x amin'ny mpizara Ubuntu.
Toa mahafatifaty ilay izy 3.
Nandro fandroana tsara ilay faritra hita maso, satria fantatro fa Joomla (v1.5) dia saika tsy niova izy io.
Hadinoko ny nametraka ny sarin'ny atin'ny backend fa raha hitanao ny zavatra manaitra anao dia havaozina tokoa ka ny sisa tavela amin'ny endrika poker milaza hoe: uff, aiza no hanombohako? Na izany na tsy izany, arahabaona.
Namana Krel, fahafinaretana inona = D !!! ...
Fampianarana mivelatra nefa tena feno, mahatalanjona hoy aho ...
Vao kelikely lasa izay dia nametraka LAMPP aho hizaha toetra an'i Joomla satria manana tetik'asa roa azo atao aho, miditra amin'ny bilaogy aho ary hitako ity, tsy maintsy ho karazana famantarana = D ...
Misaotra tamin'ny fampahalalana, hiandry ny soratanao momba ny fiarovana aho ...
Eny, midadasika izy io ary izany ilay kinova fohy XD.
Hanoro hevitra ny kinova 2.5 ho an'ny tetik'asa matihanina aho, izay LTS, tena voalamina tsara ary manana fanitarana, modely sns.
Ny lohahevitry ny 3.0 dia ny nanao fiakarana mahaliana, indrindra amin'ny fahitana, ao anatin'izany ny bootstrap sy ny endrika mamaly ho an'ny finday. Manomboka tsingerina vaovao, saingy mbola mila mandeha kely.
Na izany na tsy izany, manantena aho fa hanana ny manaraka tsy ho ela. Miarahaba 🙂
Ny zavatra tsara indrindra momba ny kinova 3 dia ny fanatsarana azy ho an'ny mpizaha finday.
Eny tokoa, tsy isalasalana fa ny fanatsarana ny kintana no nolazainao, ny fahaiza-mampifanaraka ny fitaovana finday.
Na izany aza, ity kinova ity koa dia misy fanatsarana sy fanavaozana maro hafa, teknika sasany toy ny mpamily PostgreSQL, fanarahana fenitra ary fikajiana kaody, ary sary maro hafa ary ho an'ny mpamorona. Na ahoana na ahoana, dia tsy maintsy ho hita ho fiandohan'ny tsingerina vaovao.
Xaelkaz dia hoy izy:
Feno fankasitrahana fotsiny aho 🙂
Mamaly an'i Xaelkaz
Tongasoa ianao, nahafinaritra izany.
Rehefa avy nahita an'i KZKG ^ Gaara nandika ara-bakiteny an'i Joomla (sa i Drupal?), Matokia ahy, tsy hampiasa an'io CMS io amin'ny zava-dehibe aho. 😛
Raha ny hevitro ny votoatin'ny Joomla dia matanjaka amin'ny resaka filaminana. Na izany aza, ny fanararaotana fanitarana sy môdely dia mety hiteraka lavaka lehibe.
Saingy toa ny zavatra hafa rehetra ihany koa izy io, miankina amin'ny fampiharana ny fiarovana izay ampiharina (na amin'ny serivera na amin'ny CMS), ny fanoloran-tenan'ny mpitantana an'io asa io sy ny fisainany ao anatiny, ary mazava ho azy, ny fahaizan'ny mpitantana. mpanafika Fa ny zava-dehibe dia ny fanavaozana ny joomla, amin'ny fomba fanavaozana ny rafitray ihany koa.
Tsy haiko hoe maninona rehefa mampiasa Midori aho dia mahazo Mac OS, oh oh miaraka amin'ny agents mpampiasa.
Misaotra betsaka anao amin'ity fampianarana ity, miaraka aminy no hanaovana andrana amin'ny pc 😀
Izay no maha-izy azy rehetra ary noho izany dia hitantsika raha azo hatsaraina ny fomba fiasa sasany.
Mahagaga fotsiny, misaotra anao nanokana fotoana hanazavana azy amin'ny fomba feno sy tsotra ka sahiko milaza fa mamporisika ny hafa. Misaotra anao tamin'ny fanomezana sy fahalalahan-tanana nataonao
Misaotra anao. Tsotra kokoa noho ny mety ho izy fa ny fametrahana azy amin'ny taratasy dia mila miasa, antenaiko fa hahatratra ilay tanjona tena tsara tarehy napetrako ny tenako.
Miarahaba ary mankasitraka hatrany aho noho ny fandokafana.
Roby2013 dia hoy izy:
Tena nanompo ahy tsara ilay lahatsoratra ary narahiko hatramin'ny taratasy, misaotra betsaka, arahaba!
Valiny tamin'i Roby2013
NyoCoreX dia hoy izy:
Tena tsara ho ahy izany, tsotra be izany, tao an-dakilasy nampianaran'izy ireo fomba tsy dia tsara sy sarotra kokoa izahay: S
Valio amin'i NyoCoreX
Nokia Mandrakizay dia hoy izy:
Misaotra betsaka, mora be, nohazavaina tsara daholo.
Amin'ny lafiny Ubuntu graphique dia loza xD
Mamaly an'i NokiaForever
Faly aho fa nanompo anao ny fampianarana, ny idealy dia ny fahazoana ny fomba fiasa, avy eo ny endrika sy ny tsirairay dia hampifanaraka azy ireo.
NokiaForever: mihevitra ny tenako ho mpanohana aho fa tato ho ato dia mampiasa ubuntu amin'ny solo-sainako (na dia manana olon-kafa roa miaraka amin'ny openuse 12.2) aho. Angamba izany dia ho noho izy solosaina matanjaka kokoa saingy azo ekena ny zava-bita, andro vitsy lasa izay niarahako niasa tamin'ny Fedora18 sy shell-gnome marina rehefa mandroso dia mamela zavatra bebe kokoa irina. Ka ny kanelina dia tokony ho izy, tsy misy ny fampisehoana na ny fitoniana tokony. Raha ny hevitro, amin'izao fotoana izao ny Unity no mendrika indrindra amin'ny gtk. Tapaho ny fanenjehana dia manome toro-hevitra ny kde 100% aho.
Raha ny hevitro momba ny ubuntu dia aleoko foana ny rpm noho ny deba. Rehefa afaka roa volana taorian'ny fandefasana dia nahitana fitoniana tsara, ny loza dia volana voalohany aorian'ny fandefasana.
Mampiasa Windows 8 sy 7 amin'ny PC aho satria tiako ny Windows noho ny antony maro, fa miaraka amin'ny Linux OS napetraka ihany koa, satria tiako toy izany xD, ary amin'ny zavatra rehetra nolazainao dia nahatonga ahy hanandrana ny openuse 12.2 amin'ny sasany , ary ny firaisana dia tsy tiako izany, aleoko ny gnome mahazatra ary manova azy amin'ny compiz sy ny hafa.
kordobit dia hoy izy:
Boky tsara tokoa, misaotra. Ny hany zavatra nataoko rehetra ary napetraka tsara izy, hitako ny tontonana joomla admind, fa rehefa hitanao ilay pejy, ny pejy Apache banga izay milaza fa mitohy dia mipoitra io asa io, maninona ary izany, arahaba sy fisaorana.
Mamaly an'i kordobita
Hamarino ny URL izay napetrakao ao amin'ny browser. Ny vavahady admin dia subdirectory an'ny tranonkala, hamoahana ny tranonkala, esory ny ampahany amin'ny mpitantana.
Na aiza na aiza dia tsy maintsy napetraka izy io. Raha toa ianao ka nanao toy ny ohatra hoe tokony ho ao amin'ny IP / joomla / ny tranonkala ary raha toa ka mametraka ny IP fotsiny ianao dia tsy hisy na inona na inona, ny rakitra HTML fotsiny momba ny satan'ny mpizara. Na izany na tsy izany, midira ao amin'ny / var / www / ary zahao izay lahatahiry misy. Ao amin'ny tranokala raha tsy nanova ny apache ianao, / var / www / no IP, ary tsy misy, raha apetraka ao amin'ny ambaratonga ambany ny joomla dia apetrakao fotsiny ny IP / lower_directory. Somary mikorontana ihany fa tsy haiko ny manazava ny momba ahy bebe kokoa momba izany.
tsia raha efa fantatro izany, raha mahazo ny tontolon'ny fitantanan-draharaha aho ary miditra amin'ny joomla, dia efa nametraka maro tamin'ny mpizara windows aho fa tsy tao amin'ny linux mihitsy, manana izany ao amin'ny faka apache ao / www apetrako ny mydomain / administrator ary Azoko ny tontonana ary tsara daholo izany, saingy esoriko ny mpandrindra mba ho hita ny tranonkala mahazatra ary tsy hita izy io, manome ahy ny lesoka aho, na koa ao anatin'ny tontonana joomla dia omeko azy hahitana vavahady ary tsy hita izany , ny zava-misy dia ny Linux tsy haiko tsara ny fomba famindrana, fa amin'ny windows dia ho voavaha aho hehehe, tsara ho hitantsika izay azo atao, misaotra anao ihany
yokony dia hoy izy:
Tena tsara ny tutorial.
Mitovy amin'ny fizotran'ny debian izany.
Mamaly an'i yokony
Ing. Guillermo Castro dia hoy izy:
Boky tena tsara, nitady fitaovana hampiharina ao amin'ny orinasa aho ho an'ny antontan-taratasy, toa mahafinaritra izany.
Misaotra betsaka amin'ny boky fampianarana.
Valiny tamin'i Ing. Guillermo Castro
Pedro Cardenas del Angel dia hoy izy:
hey misy olona afaka nifindra monina tranokala vita amin'ny joomla, esque nataoko iray, mametraka joomla 2.5.9 amin'ny windows 7
Nampitaiko tamin'ny windows xp, namerina ny bd tamin'ny windows 7 aho ary nampitaiko tamin'ny xp import tsara daholo
avy eo kopia ny fampirimana joomla izay ao amin'ny www,
ary wala mandeha tsara ny zava-drehetra nefa tsy misy olana
Te hanao toy izany koa aho fa amin'ny ubunto, satria any aho mila manamboatra ny serivisy dhcp sy dns, ary mametraka ny mpizara apache
Manao ny fizotran'ny fametrahana avy eo aho manafatra ny tahiry
ary soloiko ireo fisie fametrahana ary tsy apetrako fotsiny ilay fisie config.php
ary entiko ny pejy ny index.php raha misokatra izy, fa eo aho manandrana mivezivezy amin'ny pejy ary tsy hisokatra intsony dia tsy haiko izay mitranga
Omeko ny fampirimana lehibe ny alalana hamaky sy hanoratra rehetra, fa ny pejy ataoko dia tsy entin'ny olona manampy ahy tsara ...
Mamaly an'i pedro cardenas del angel
androd dia hoy izy:
Mamaly an'i androd
Oscar Villa dia hoy izy:
Misaotra betsaka. Zavatra mahatsikaiky: ity no lahatsoratra na lesona voalohany arahiko tsikelikely nefa tsy mila manampy na manova zavatra aho ary mahazo ny vokatra andrasana. Ary minoa ahy fa nanaraka be dia be aho.
Misaotra betsaka anao, ary arahaba soa: hoy ianao hoe mandra-pahoviana, saingy mendrika izany, voasoratra tsara: manaraka azy ianao ary manana joomla!
Mamaly an'i Óscar Villa
tasy dia hoy izy:
Salama! Voalohany indrindra dia te-hiarahaba anao amin'ny tutorial aho, feno sy mazava kokoa fa tsy azo atao izany.
ny fanontaniako dia satria nanana olana aho ary tsy fantatro ny fomba famahana azy: nametraka jiro aho ary rehefa niditra ny ip tao anaty browser aho dia namerina izao manaraka izao:
Ny URL nangatahina / tsy hita tao amin'ity mpizara ity.
Apache / 2.2.22 (Ubuntu) Server amin'ny 192.168.1.101 Port 80
Tsy azoko ny dikan'izany ary raha toa ka tsara daholo ny zava-drehetra.
toy ny angona: afaka niditra phpmyadmin tsara tamin'io adiresy IP io aho.
Tena tiako ny fanampiana rehetra azo atao!
Mamaly an'i manucha
Fampianarana tena tsara. Tena mora ny manaraka.
Hugo garcia dia hoy izy:
Salama .. tutorial tena tsara .. nahafinaritra ahy io !!
Manana fangatahana aho, ahoana no fomba hamoronana pejy vaovao mba tsy hampiasa ireo ohatra fisie?
Misaotra betsaka anao ..
Valiny tamin'i Hugo Garcia
Pedro mendoza dia hoy izy:
Server_IP / joomla. Fa raha tsy tiako hivoaka ilay / joomla ary mampiditra ny pejy amin'ny alàlan'ny server IP fotsiny, inona ny rakitra fikirakira tokony hikasihako
Valiny tamin'i Pedro Mendoza
Miarahaba anao aho noho ny fanazavana ary tena feno fankasitrahana aho amin'ny fomba antsipiriany nanatanterahanao izany, nanam-potoana namakiana lahatsoratra hafa aho noho ny lesoka nataoko ary anisan'ireo notanihiko tamin'io no tena tiako satria teto no nahitako ny vahaolana.
OK tsy maintsy lazaiko ... ara-dalàna aho tsy mandefa fa inona no nitranga ... Tena nijanona niaraka tamin'ny crara poker aho ary fantatrao fa antsasaky ny fihomehezana miaraka amin'ny fanandratana ny tarehy satria izany indrindra no nataoko rehefa nahita ireo sary aho ... miarahaba
boky torolàlana tena tsara, tena nilaina izy io ary tsy nanome olana, niasa ny zava-drehetra tamin'ny voalohany manaraka ny dingana, misaotra an'io asa io
TiO MaKiNa dia hoy izy:
Boky torolàlana tena tsara.
fahombiazana sy fitahiana ..
Mamaly an'i TiO MaKiNa
Manana ny version 5.5.9 an'ny PHP aho ary ny rakitra php.ini dia tsy mampiseho izay nosoratanao.
Rehefa manoratra localhost / joomla aho dia miteny amiko fa tsy mahita na inona na inona apache2.
Raikitra: sendra manana lagy aho, ary tsy mametraka joomla ao amin'ny lahatahiry / var / www / html / joomla izay tokony hatao, fa ataoko ao / var / www / joomla
Caro dia hoy izy:
Misaotra vaovao aho amin'ny famoronana pejin-tranonkala ary nanampy betsaka ahy izany
Mamaly an'i Caro
aljndr dia hoy izy:
Misaotra amin'ny antontan-taratasy amin'ny antsipiriany. Niasa tamin'ny voalohany.
Fisalasalana fotsiny, ireo tsipika voalaza ao amin'ny /etc/php5/apache2/php.ini dia tsy miseho. Heveriko fa efa ampiasaina io ary tsy ilaina izany?. Raha ny amiko dia nampiasa ny kinova 5.6.4 + dfsg-1 aho
Mamaly an'i aljndr
Salama, fampahalalana tena tsara, voazava tsara. Ankehitriny, manana tantara amin'ny fotoana nametrahana IP_Server / joomla aho. Mahazo 404. Rehefa manandrana ny pejy apache sy phpadmin aho dia tsara ny valiny, na izany aza amin'ny joomla dia tsy mandeha amiko izany. Fantatrao ve izay mety ho?
Mahafinaritra fotsiny !!!!!
@krel, vaovao aho amin'i joomla, azonao atao ve ny milaza amiko amin'ny antontan-taratasy rehetra hoe aiza no hanombohana?
Ervin dia hoy izy:
Misaotra amin'ny fidirana !!!!
Valiny tamin'i Ervin
Salama, azonao atao ve ny milaza amiko hoe maninona no misy izany lesoka izany? Sambany aho manomboka amin'ny Linux sy Joomla.
Ny URL / joomla nangatahina dia tsy hita tamin'ity mpizara ity.
Apache / 2.4.10 (Ubuntu) Server amin'ny 192.168.0.102 Port 80
esintes dia hoy izy:
ho anao izay manana hadisoana 404 Not Found
Namaha izany aho tamin'ny fametrahana ny fampirimana noforoninay (joomla) ao anatin'ny folder «html» efa misy
Nataoko tamin'ny malemy fanahy izany; sudo nautilus (ubuntu), sudo nemo (mint), sns ... ary niroso tamin'ny famafana ny fisie index.php avy tao amin'ny folder "html" aho ary efa nopihako sy nopetahana ny zava-drehetra tao anaty naoty "joomla"; Nataoko aloha ny fampirimana miafina.
Valiny amin'ny esintes
Zecaspider dia hoy izy:
Na tutorial feno sy tsotra kokoa hitako tao amin'ny Internet momba na mampiasa server Joomla fa tsy Ubuntu.
Ny ankamaroan'ny voltigado nataon'i partilhar, ary ny tutorial momba ny volo parabéns.
(mamihina avy any Angola)
Mamaly an'i Zecaspider
Fitaovana Twitter hampidina ny bitsika rehetra nataonao
Fanomanana ireo tadin-tsoratra ho adika amin'ny PoEdit sy ny famoronana Catalogs